Izitayile Zoyilo | May 2022
Yintoni iNdlu yeSitayile seGcisa
Nantsi into ekufuneka uyazi malunga nobugcisa bokwakha isitayile.
I-Mid-Century Design iyintoni? -Yonke into ekufuneka uyazi malunga neFenitshala yanamhlanje ye-Mid-Century
Uyilo lwale mihla lwenkulungwane lushushu kunangaphambili, kodwa ngandlela thile, kunzima ngakumbi kunangaphambili. Ukuqonda ngokupheleleyo ukujonga, kuya kufuneka uyazi kancinci ngembali yayo enomdla- kunye nendaleko.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga noyilo lweRustic- Yintoni iRustic Design?
Kukho izinto ezininzi ekufuneka ubenazo ukuze ube nokuchaneka ngokuchanekileyo. Nantsi into ekhoyo.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga noyilo lwenguqu- luyintoni uyilo lwenguqu?
Usenokungayazi inkcazo yencwadi yesifundo, kodwa ubusibone ngokupheleleyo esi simbo ngaphambili. Nantsi kanye kanye indlela yotshintsho.
Uhlobo lweSpanish Colonial Design -Yintoni i-Spanish Colonial Design?
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga namakhaya amaKoloni aseSpain.
Yintoni iTudor Style House? Uhlobo lweTudor House Design
La makhaya antsonkothileyo, anzima ngamatye abona ukwanda kokuthandwa kwinkulungwane yama-20.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga noyilo lweBohemian -Yintoni uyilo lweBohemian
Andiqinisekanga ukuba luyilo olunjani lwe-bohemian? Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi.
Yintoni i-French Country Design? -Iinyani malunga nesitayile selizwe laseFrance
Ukuba kukho isitayile esinye yoyilo esinokukusa, ngokuqinisekileyo kuyilo lwelizwe laseFrance. Ke into oyifunayo ukuze ujike indawo yakho ibe liphupha lelizwe laseFrance elifanele iibhodi zePinterest kuyo yonke indawo? Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neHollywood Regency Design -Yintoni iHollywood Regency Design?
Siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi ukuqonda uyilo lweHollywood Regency.
Yintoni uyilo lweScandinavia? -Isihombiso saseScandinavia kunye neeNdlela zeSitayile
Thatha into ocinga ukuba uyazi malunga ne-hygge kwaye uyilahle ngefestile. Esi sicacisi siza kukuxelela yonke into oyifunayo malunga noyilo lweScandinavia, emva koko ezinye.
Yintoni iVictorian House House? -Indlela yoyilo lweNdlu yeVictorian
Nantsi yonke into oyifunayo malunga namakhaya esitayile seVictoria.
Yintoni iBelvedere? Uhlobo lweBelvedere yoyilo
Uzibuza ukuba yintoni i-belvedere? Nantsi into ekufuneka uyazi.
Yonke into ekufuneka uyazi ngokuYilwa konxweme- Yintoni uYilo loNxweme?
Sikuxelela yonke into oyifunayo malunga noyilo lonxweme.
Ungabona uyilo lobukoloniyali baseFrance kwihlabathi liphela, kodwa esona sixeko saseMelika ukuyibona yiNew Orleans, eLouisana. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuba yintoni kunye nembali yayo.
Uyilo lwanamhlanje? Yonke into kufuneka uyazi malunga noyilo lwale mihla
Nangona isenokuba lelinye lawona magama asetyenziswa kakhulu kuyilo, uyilo lwangoku yeyona nto inokuba yeyona ndlela ichazwe gwenxa, ke siza kuseta irekhodi ngqo ukuba yeyiphi kanye le uyilo lwanamhlanje.
Yintoni uyilo lweMveli-Uhlobo lweNdalo yangaphakathi yoYilo
Kodwa yintoni kanye kanye eyenza into ibe 'yeyesiko,' kwaye imveli ibuyela umva kangakanani? Siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi, kwaye mhlawumbi uyakuqiniseka ukuba imveli ayisoloko ilingana.
Yintoni uYilo lwezoShishino? -Ulongeza njani uyilo lweShishini kwiKhaya lakho
Ke yintoni kanye kanye eyenza iindawo zokugcina ezingenanto ziqheleke kangaka? Nantsi yonke into oyifunayo malunga noyilo lweshishini.
Yintoni i-Minimalism? -Uyilo oluNcinci isitayile sokuhombisa
Sibeka irekhodi ngokuthe ngqo kube kanye nakwinto yonke ukuba yintoni eyona nto incinci.
software yoyilo yasimahla yokwakha
itheyibhile yokutyela esongwayo enezitulo
iindawo eziphezulu zeholide 2018
Umbala ogqwesileyo wepeyinti engwevu